Izicwangciso ezili-10 eziPhambili zoRhwebo lweSuku lukaJanuwari 2022
Iindlela ezili-10 eziPhambili zoRhwebo ngo-2021!
Njengoko igama lisitsho, ukuthengisa kwemini kufuna ukuba ungene kwaye uthengise izikhundla imini yonke. Kananjalo, ukungaguquguquki kunye nokucinga kakuhle malunga nesicwangciso sokurhweba ngemini kubalulekile. Emva kwayo yonke loo nto, kunokuba lula kakhulu ukuba ihanjiswe kwaye iqale ukwenza izigqibo ezibalulekileyo zorhwebo ezingakhange zicingwe kakuhle.
Ngale nto engqondweni, sidibanise iindlela ezithile zokurhweba ngemini ukuqinisekisa ukuba umile elona thuba lifanelekileyo lokwenza imali kwangoko. Nokuba unomdla kurhwebo lwe-forex, i-crypto, i-stocks, okanye enye into-thina kwi-Learn 2 Trade usigubungele.
Yintoni ukuthengiswa kwemini?
Ngokusisiseko, ukuthengisa ngemini luhlobo lotyalo-mali kwi-Intanethi apho uvula kwaye uvale indawo ngaphambi kokuphela kosuku lokurhweba. Ngokungafaniyo nesitokhwe kunye neebhondi- yimithombo yemveli yotyalo-mali, urhwebo losuku alubanjelwa iinyanga okanye iminyaka ngexesha ngabatyali mali. Endaweni yoko, izikhundla zihlala zigcinwa iiyure okanye imizuzu.
Ngenxa yexeshana elifutshane lokurhweba ngemini ngokubanzi, abatyali zimali bangabeka inqwaba (okanye namakhulu) eeodolo nganye mihla le. Eyona njongo iphambili yabantu abasebenza kurhwebo losuku kukujolisa kwinzuzo encinci. Kwaye kubarhwebi abanamava, oku kungakhokelela kwizikhundla ezininzi zokuphumelela imini yonke-zikhokelela kwinzuzo esempilweni.
Ayinamsebenzi nokuba ungumrhwebi onamava okanye uphawu olutsha kwindawo, wonke umntu ufumana ilahleko kunye nokusilela ngamanye amaxesha apha endleleni. Yonke yinxalenye yamava, kwaye ngamanye amaxesha inokuba sisifundo esinexabiso kwinto ongafanele uyenze. Kungenxa yoko le nto ukwakha iseti yeendlela ezicacileyo zokurhweba kusuku lokuya phambili kubalulekile!
Xa kuziwa kurhwebo losuku, kukho ezinye iimarike ezinokukulungela 'T'. Ngale nto engqondweni, sicebisa ukuba uqale ngeeklasi enye okanye ezimbini zeaseti de ufumane iinyawo zakho zokurhweba ngemini.
Kukho uluhlu olubanzi lwezixhobo zokurhweba onokuzikhetha kwezi ntsuku, ngombulelo omkhulu kwinkqubela phambili ebalaseleyo kwitekhnoloji ekhoyo kuthi. Ukusuka esitokisini ukuya kwi-forex kunye ne-cryptocurrency, iqela lethu libeke ezinye zeemarike zorhwebo ezithandwayo ezifunwa ngabatyali mali.
Oku kugubungela zombini izibonelelo kunye nokusilela ukukunika umfanekiso omkhulu wokuba yeyiphi enokuba yeyona ilungileyo kuwe.
Zininzi kakhulu iimarike ezikhoyo kuwe ukuba ufuna ukurhweba ngee-cryptocurrencies. Ngokufana ne-forex, imakethi ye-crypto ivuliwe i-24/7, ke iya isiba ngakumbi kwaye ithandwa ngakumbi phakathi kwabathengisi bemini. Iimveliso zesekondari zikuvumela ukuba wenze okungakumbi kokubini kwehla kunye nokunyuka kwamaxabiso, kwaye ezinye iinkozo ze-intanethi ziyaziwa zinamanqanaba aphezulu okuguquguquka. Oku kubenza bagqibelele kuwe ukuba ungumrhwebi we-intraday.
Njengomtyali mali wexesha elifutshane, ukuthengisa ngemini yeedatha zemali ukwenza ukuba ugqithise iindleko kunye nemirhumo enxulunyaniswa nenkxaso yobusuku. Oku kuthetha ukuba awunyanzelekanga ukuba ulale ebusuku ukhathazekile malunga naluphi na utshintsho olusebusuku kwixabiso lentengiso.
Ngaphezulu kweBitcoin, kukho ezinye iindlela zokufaka imali ezinokuthengiswa kunqakrazo lweqhosha- njenge:
Ezinye zezona zinto zixhaphakileyo eziza nokuthengisa kwemini kwi Imakethi yeemali zedijithali:
Izidingo zemali eziphantsi: Ukurhweba ngee-cryptocurrensets kukuvumela ukuba ubandakanyeke kwimarike ngexabiso eliphantsi lemali.
Izixhobo zemfundo: Kukho isixa esikhulu sokufikeleleka kuwe njengomrhwebi wosuku lwe-crypto kwezi ntsuku. Kuluhlu olukhulu lwesoftware, izixhobo kunye nezixhobo zemfundo ezikhoyo- ungarhweba ngemini naphi na apho uthanda khona, 24/7.
Ixabiso liyatshintsha: Ukuhla kwamaxabiso kuguquguquko kwimakethi yemali engezantsi yedijithali kunokudala inzuzo enkulu. Ewe kunjalo, kusoloko kukho umngcipheko onokuhamba ngenye indlela kwaye wenze ilahleko.
Ukuba uluhlobo lomrhwebi onomdla kwitekhnoloji kwaye ungakhathali ngokuthatha umngcipheko ophuculweyo, iimarike ze-cryptocurrency zinokuba yindebe yakho yeti.
Amasheya okuthengisa emini ahlala apho abarhwebi abatsha besiya kuqala. Kukho iindidi ezininzi zezabelo ezikhoyo kurhwebo. Kwimarike yezemali, abathengisi bavame ukuvala izikhundla ekupheleni kosuku lokuthengisa. Oku kuqinisekisa ukuba uhlala kude 'nomngcipheko wokungena'.
Kwabo abangaziyo, t gapping umngcipheko ubhekisa kwixabiso lesabelo lokuvula eliphantsi kakhulu okanye elingaphezulu kunokuba lalinjalo esiphelweni sosuku lwangaphambili lokuthengisa. Inkcazo yoku kusilela kuvame ukuhla ukuya kwiimpembelelo zangaphandle okanye kwiindaba ezisisiseko zobusuku ezibangela utshintsho kwixabiso lenkampani.
Ngenxa yezithintelo zeyure yokuvula, ii-indices zokuthengisa zosuku azifani kakhulu ukuba zabelane ngorhwebo. Ngokuthengisa ii-indices, endaweni yenkampani enye; uqikelela ukuba a iqela Izabelo zizakwenza.
Uya kuba nokufikelela kwinxalenye enkulu yemarike yemasheya ngenxa ye-FTSE 100 (ezona nkampani zinkulu kwiLondon Stock Exchange). Ukurhweba ngee-indices zemali okanye ikamva lesalathiso kukunika ukubonwa okuhle kurhwebo kwi-FTSE 100. Ezinye izalathiso ezihamba phambili zibandakanya iNew York Stock Exchange, iNASDAQ, kunye neTokyo Stock Exchange.
Akukho zindlela zimbini malunga nayo-intengiso yemali yeyona ndawo inkulu kunye neyona ndawo inamanzi ehlabathini. Iimali zihlala zithengisa ngababini, njenge-EUR / GBP okanye i-AUD / NZD. UWKukhetho oluninzi kangaka, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kuphela zizinto ezimbalwa ezikhethiweyo ezingamanzi ngokwaneleyo ukukunika uzuzo olufanelekileyo lwangaphakathi.
Ngayiphi na indlela, abathengisi bemini bazama ukuguqula inzuzo kumanqanaba otshintshiselwano kunye nokutshintsha kwexabiso lokuhamba. Ukubeka ngokulula, xa ucinga ukuba imali izakuhamba isezantsi okanye phezulu ngokunxulumene nezinye iimali, kulapho unokuthenga okanye uthengise.
Nazi ezinye zeempawu ezinomtsalane ngokubhekisele kurhwebo losuku ngaphakathi kwintengiso ye-forex:
Akukho khomishini: Ngokubanzi, awuyi kucelwa ukuba uhlawule ikhomishini ngokuthengisa kwangaphambili. Isizathu soku kukuba abarhwebi be forex benza imali kwi sasaza ubhatalela iikowuti zorhwebo.
Ukurhweba nanini na: Ngokumalunga nentengiso ye-forex, akukho sidingo sokukhathazeka ngeyure zokuvula. Imarike ye-forex isebenza rhoqo, iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki. Kulabo banethuba elifutshane elifutshane phakathi evekini okanye abangafuni kukhangela imarike yonke imihla, i-forex inokuba lolunye uhlobo.
Imfuneko yotyalo mali ephantsi: Ngamanye amaxesha, imarike yesitokhwe yemveli inokuba notyalo-mali obuncinci, ngelixa umncinci njenge- $ 50 ungaqala ukurhweba ngemali.
Kanye kunye nezona mfuno zisezantsi zotyalo-mali, uncedo lobuchwephesha kunye nezicwangciso zasimahla- intengiso ye-forex yenye yeentengiso ezifikelelekayo kubarhwebi ezikhoyo.
Ukuba unomdla wokufunda ngakumbi ngorhwebo lwe-forex, ukuthengisa ngemini okanye ngenye indlela-unokufumana ulwazi oluninzi oluncedo malunga ne-Forex kwiwebhusayithi yokufunda ye-2 yoRhwebo.
Ngamafutshane, 'ikamva' sisivumelwano (okanye isivumelwano) phakathi komthengi kunye nomthengisi. Oku kunxulumene nomyalelo wokwenza urhwebo oluthile kwixabiso elimiselweyo kunye nomhla. Ngamanye amagama, eli iya kuba lixesha elizayo, yiyo loo nto igama.
Njengomrhwebi wosuku, ujolise ekuzuzeni nakuphi na ukutshintsha kwexabiso kwintengiso. Oku kunokwenzeka nangaliphi na ixesha elinikiweyo ukususela xa kwenziwa ikhontrakthi yokuthengisa, ukuya kwindawo yokuvala. Ngokubanzi zihlala zimbini iintlobo zabarhwebi abasebenzisa ikontrakthi yexesha elizayo-abacebisi kunye needrey.
Rhoqo kunoko, izivumelwano zexesha elizayo zijikeleza izinto ezingaphantsi kwezinto ezinje:
Isinyithi esixabisekileyo - igolide, isilivere, iplatinam, ialuminiyam, ubhedu, isinyithi kunye neuranium (ethengiswa kakhulu)
Umbono wekamva ukuthambisa ukungaqiniseki kunye nomngcipheko kubarhwebi. Umzekelo, ukuba ubusazi ukuba uza kuvelisa itoni enye yengqolowa kunyaka olandelayo, ungathengisa ingqolowa ngexabiso lentengiso. Kusoloko kukho ithuba nangona amaxabiso embona ezokwehla kulo nyaka uzayo, kwaye ixabiso lentengiso liyawa.
Yilapho ixabiso elichazwe kwangaphambili liza kukunceda kwisicwangciso sakho sokuthengisa ngosuku, njengoko ungathengisa ingqolowa yakho ngelo xabiso Ngoku. Ngale ndlela, uyakuzikhusela isixa esithile senzuzo. Ukuya kuthi ga kwiimarike zemali, ikamva lokurhweba isebenza ngendlela efanayo. Ngokusisiseko, sisivumelwano sokuthenga okanye ukuthengisa imveliso yezemali kamva emgceni, usebenzisa umhla ekuvunyelwene ngawo kunye nexabiso elimiselweyo.
Ngokwemigaqo kaLayman, uqikelela ukuba isalathiso esithile siza kufikelela kwinqanaba elithile kumhla ongezantsi komgca. Iimveliso zezemali okanye izixhobo zibandakanya izinto ezinje ngeemali zamanye amazwe, izatifikethi zedipozithi kunye neebhili zoonondyebo - ukubala nje ezimbalwa. Into enomdla, ixabiso lentengiso yeekontrakthi zexesha elizayo zezemali zihlala zihamba ngendlela eyahlukileyo kumanqanaba enzala. Kungenxa yoko le nto isenza ukuba sibe sisicwangciso esifanelekileyo sokurhweba ngemini ukuba siqwalasele!
Kukho ezinye izinto ezimbalwa esicinga ukuba ufanele ucinge ngazo xa kuthengiswa ngosuku kwimarike yexesha elizayo:
Inkunzi yexesha elizayo: Ixesha elizayo lifuna imali esezantsi xa kuthelekiswa nentengiso yentengiso yesitokhwe. Iingcali zorhwebo ziyacebisa ukuba uqale ubuncinci amawaka amabini eepawundi ngekamva. Iikontrakthi ezahlukeneyo zexesha elizayo ziya kufuna isixa esahlukileyo senkunzi.
Ukuguquguquka kwexesha elizayo: Wphezulu Iimarike ezizayo zibonelela ngenqanaba lokuguquguquka, kuxhomekeke kwikamva -imakethi yekontrakthi inokutshintsha. Soloko uqinisekisa ukuba awusekho nakweziphi na izikhundla ngaphambi kokuba uyeke ukurhweba kwikontrakthi ethile yexesha elizayo. Kuyenzeka ukuba urhwebo lwangaphambili kunye nentengiso yasemva kwexesha kwikamva kuba kukho amanqanaba aphezulu wokungazinzi kunye nevolumu e-US, kwiiseshoni zaseYurophu naseAsia.
Iimvumelwano zexesha elizayo eNcinci: Njengabantu abathengisa ngaphakathi kwintengiso yexesha elizayo bahlala begxila kwisivumelwano esithile sexesha elizayo, awuyi kufumana uninzi lokwahluka kwemini. Ukuba ulandela ivolumu kunye nokungazinzi kunye nokuhluka, kunokuba ngcono ekuthengiseni kwintengiso eyahlukileyo.
Ukubeka ngokulula, ukuba ungathanda ukuqala ukurhweba ngamandla, kwimpahla yorhwebo, okanye kwiimarike zeoyile- emva koko uya kufumana ikamva elihendayo. Yikhumbule nje into yokuba kuya kufuneka unciphise ingqalelo yakho kwizivumelwano ezimbalwa zexesha elizayo, kwaye kuya kubakho ubuncinci beemali eziyimfuneko.
Uninzi lwamaqonga wabarhwebi anika abathengisi ithuba lokurhweba 'kukhetho lweemarike'. Ikhontrakthi yokhetho okanye isivumelwano sikuvumela ukuba uthengise okanye uthenge iasethi ngaphakathi kweeparamitha 'zomhla wokuzilolonga' (umhla omiselwe kwangaphambili).
Ezona ntlobo zaziwayo zezinto onokukhetha kuzo ziindlela zokufowuna kunye nokubeka isitokhwe.
Ukukhetha ukubiza isitokhwe: Umnini uyakwazi ukuthenga isitokhwe kumthengisi okoko nje kungaphakathi komhla wokuphelelwa, ngexabiso elithile. Ukuba ixabiso lesitokhwe esiphantsi liyenyuka, kunjalo nexabiso lokhetho lokufowuna.
Isitokhwe sibeka ukhetho: Ngolu didi lweemarike zokhetho, umnini uyakwazi ukuthengisa isitokhwe ngexabiso ekuvunyelwene ngalo ngaphambili. Kwakhona, oku kufuneka kube ngaphambi komhla othile. Ukuba ixabiso lesitokhwe esiphantsi lihla, linjalo nexabiso lokhetho olubekiweyo.
Lilonke, nganye yeemarike esithethe ngazo ngasentla zilungele ukuthengisa kwemini. Ke, nokuba yeyiphi na intengiso, okanye iimarike ogqiba ukuzibandakanya kwiindlela zakho zokuthengisa zosuku - kubalulekile ukuba ufunde ishishini elithile ngaphakathi-ngaphandle!
No. 2: Bambelela kwiSicwangciso soRhwebo
Kungakhathaliseki ukuba yeyiphi imarike onomdla kuyo, enye yezona zicwangciso ezifanelekileyo zokurhweba ngosuku ukwenza isicwangciso kwaye uzame konke okusemandleni akho ukunamathela kuyo. Uninzi lwabarhwebi abanamava nabo bayayigcina idayari, njengoko iyindlela entle yokuvavanya kwakhona iindlela zangoku zokurhweba. Oku kukwavumela umntu ukuba enze izicwangciso ezitsha ngokufunda kwiimpazamo ezidlulileyo.
Ngale nto engqondweni, siza kuqhuba ngeendlela ezithile ezivavanyiweyo ezisetyenziswa ngabarhwebi.
Ezinye zezona ndlela zixhaphakileyo zokurhweba ngaphakathi ngaphakathi zezi zilandelayo:
I-HFT (Ukurhweba rhoqo rhoqo)
Amanqanaba aKhulu awaneleyo
Kuluvo olulungileyo ukuvavanya ukuba ingakanani imali oyinkunzi oyikulungeleyo ukubeka emngciphekweni urhwebo ngalunye. Abanye abathengisi abaze babeke emngciphekweni ngaphezulu kwe-2% yeakhawunti yabo yorhwebo kwindawo nganye. Ngamanye amaxesha oku kuye kwehle njenge-1%.
Umzekelo, masithi une- £ 20,000 kwiakhawunti yakho yorhwebo, kwaye uthathe isigqibo sokuba ufuna ukubeka emngciphekweni ngaphezulu kwe-0.5% yeloo mali (kurhwebo ngalunye). Eyona nto uza kuyibeka emngciphekweni wokuphulukana ne- £ 100 ngorhwebo ngalunye (0.5% x £ 20,000).
Kuhlala kungumbono olungileyo ukubeka isixa semali sokuthenga kwelinye icala. Oku kufanele ukuba kube sisixa ungoyikiyo ukuphulukana naso.
Kungaba lula ukuqala kakuhle kwaye uphazanyiswe bubomi. Ewe kunjalo, unokuphulukana nezinye izibonelelo ezinkulu ngokususa iliso lakho ebholeni. Ngale nto engqondweni, xa uthathe isigqibo sokuba zingaphi iiyure ngosuku onokuzinikezela kurhwebo, kuya kufuneka uzame ukubambelela kuloo.
Bathi ubulumko ngamandla, ke kuyavakala ukuba uzixhase ngamazinyo ngolwazi lokurhweba. Ukuzigcina unolwazi, singacebisa ukuba uhlale unolwazi ngale mithombo yolwazi ilandelayo:
Iindaba zentengiso yesitokhwe
Amajelo eendaba ezemali
Iindaba zoqoqosho lwehlabathi
Ukuzibekela iithagethi ezimbalwa xa kuziwa kulawulo lwexesha kunye nophando kunokuba yinto elungileyo kuphela. Njengomrhwebi, licebo elilungileyo ukulandela kunye nokulandelela iimarike ukuze kuthi xa kuvela ithuba ukwazi ukuhamba ngokukhawuleza okukhulu.
No. 3: IiAkhawunti zeDemo zinguMhlobo wakho
Amaqonga ama-broker amaninzi aya kubonelela ngenketho yokuseka iakhawunti yedemo yokuthengisa yosuku. Ngamanye amaxesha kuthiwa zii-simulators zokuziqhelanisa, kukho iiakhawunti zedemo ezifumaneka ngokubanzi kwiintlobo ezininzi zorhwebo.
Iiakhawunti zedemo azizukubethwa, kuba ziyindlela ebalaseleyo yokufumana amava axabisekileyo ngaphandle kokuchitha idenariyo enye. Ke ngoko, awunawo umngcipheko wokuncamathela kwimali oyisebenzele nzima.
Ngelixa ziluncedo kakhulu ekuziqhelaniseni nabarhwebi abatsha, iiakhawunti zedemo ziyindlela elungileyo yokwenyani yokuba abathengisi abanamava basebenzise iindlela ezintsha zokuthengisa zosuku. Kwakhona, oku kunokufezekiswa ngaphandle kokubeka emngciphekweni nayiphi na imali. Eyona nto ibaluleke kakhulu, iiakhawunti zedemo zihlala zibonakalisa iimeko zentengiso zehlabathi-lokwenyani!
Hayi. 4: Uhlalutyo lobuGcisa boPhando kunye neendaba
Ukuze ube nethuba elihle lokuba ngumrhwebi ophumeleleyo, kubalulekile ukuba ube nokuqonda okuhle kokutolika iindaba zezezimali ngokunxulumene neeasethi zakho.
Ukuba nokuqonda okuhle malunga nendlela yokufunda iitshathi nako kuya kuba sisakhono esinamandla sokuba ube ngumrhwebi wosuku. Oku kuyakukunika ithuba xa kufikwa kumba wokuqikelela ukuba ngaba iiasethi zakho ziya kunyuka okanye zehle ngexabiso.
Ngamanye amagama, ukucwangcisa intshukumo yakho elandelayo-ke ulwazi olwahlukileyo olufumanekayo kuwe luza kukunceda kuphela.
Ukuza kuthi ga ngoku izixhobo zohlalutyo kunye nesoftware yokurhweba kubalulekile kuye nakubani na ofuna ukwenza ikhondo lokurhweba ngemini. Njengoko besigubungele ngokufutshane ngaphambili, isicwangciso esihle sokurhweba ngemini iya kuba lolona lwazi lufumanekayo. Oku kuyokukunceda uthathe isigqibo malunga nokuba leliphi icala onokuthi uluthathe kwisikhundla sakho.
Enye yeepakeji zesoftware ezisetyenziswa kakhulu ezisetyenziswa ngabathengisi bemini yile yeMetaTrader 4 (MT4). Isoftware ihleli phakathi kwakho neakhawunti yakho yokurhweba ngemini, kwaye ikunika ukufikelela kuluhlu lwezixhobo kunye neempawu. Oku kubandakanya yonke into ukusuka kufundo lwetshathi kunye nezixhobo zokuzoba, iitshathi zamaxabiso, iiodolo zesiko, kunye nokubanakho ukufaka iirobhothi zorhwebo.
Uhlalutyo lobuchwephesha ngokuyintloko luyingcamango yesiphithiphithi semathematika kwi 'T'. Abathengisi bemini bafumana uhlalutyo lobugcisa luxabisekileyo xa kuziwa kurhwebo ngaphandle kweeblinkers. Iitshathi zamaxabiso, idatha yezobuchwephesha kunye nezixhobo zohlalutyo zonke ziya kukwenza ube ngumrhwebi ongcono kunye nonomdla.
Ukujonga amanyathelo ixabiso ukusuka kwixesha elidlulileyo kuhlala kunceda abathengisi ukuba baqikelele into enokwenzeka kamva ezantsi emgceni. Kulapho kungena ithiyori yesiphithiphithi semathematics, ngenxa yorhwebo kunye nokusebenza kwengqondo kwintengiso, iintsingiselo kunye nokuhamba kwamaxabiso zihlala ziphela zilandela iphethini.
Uhlalutyo lobuchwephesha alujongi kwixabiso elimiselweyo. Endaweni yoko, ivavanya idatha yexabiso kunye nomthamo wembali ngenjongo yokuqikelela iipateni zamaxabiso. Ukuya kwisiseko sokuba ixabiso kunye neepateni zendlela ziya kuziphinda, emva koko akukho ngxoxo-mpikiswano ejonge ukunyuka kwamaxabiso kwimbali iyinzuzo.
Zintathu iindidi eziphambili zetshathi zohlalutyo lobuchwephesha ezisetyenziselwa ukurhweba kwaye zii-charststick charts, iitshathi zebha kunye neetshathi zomgca. Zonke ezi zixhobo zingasetyenziswa kwisicwangciso sakho sokuthengisa sosuku.
Apha ngezantsi kukho ezona ntlobo ziphambili zohlalutyo lwetshathi yezixhobo ezikhoyo kuwe:
Idatha yeCOT kunye nesishwankathelo sendawo
Iqonga ngalinye lomthengisi liya kwahluka kancinci, kwaye ayizizo zonke eziya kuba nezixhobo onomdla kuzo ngokukodwa. Kungenxa yoko le nto kusoloko kubalulekile ukwenza uphando kuqala.
Izicwangciso zokurhweba zemihla ngemihla ziya kuhlala zigcina iindaba zezezimali, ezivela kwimithombo eyahlukeneyo. Ukuba kukho into eyenzekayo enokuthi ichaphazele iiasethi zakho otyale imali kuzo, uyakufuna ukwazi ukuba kwenzeka nini kwaye nini.
Sidwelise apha ngezantsi eyona mithombo mikhulu yasimahla yeendaba kunye nedatha efumanekayo kuwe njengomrhwebi wosuku:
Uluhlu lweTwitter kunye noKondla: Yijonge okanye hayi, sAbathengisi be-ome be forex benza iindaba zabo zokutya kwi-twitter. Ke, ukuba unomdla kwi-forex, uyakufumana uninzi lwabarhwebi abahlonitshwayo kunye nabanikezeli beendaba zezezimali kule nkundla.
Ijusi yezeMali: Le ifuna ukuba uvule iakhawunti, kodwa yi-100% yasimahla ukuyisebenzisa kwaye inikezela ngeskwatshi esiphilayo (umntu ofunda iindaba njengoko zisitsho). Kubaluleke kakhulu ukuba uqaphele ukuba kukho ukulibaziseka kwe-10-yesibini, kwaye kwintengiso yosuku ukuba imizuzwana eyi-10 ingaba ngumahluko phakathi kwenzuzo kunye nelahleko.
Ababoneleli ngeendaba ezikwi-Intanethi kunye neeBlogs: Abanye babanikezeli beendaba abadumileyo bezezimali babukele ukuthengisa, iBloomberg, Reuters kunye neWall Street Journal. Inketho yasimahla edumileyo yabarhwebi be-forex, ngakumbi, yi-ForexFactory. Kodwa, yazi ukuba ayilunganga kwiindaba ezibukhoma kwaye ibhetele kwiidatha zembali kunye neetshathi.
Ewe kunjalo, kukho eminye imithombo yeendaba zasimahla. Kananjalo, elinye icebo lokurhweba ngemini elungileyo kukwenza umsebenzi wasekhaya kwaye ubone ukuba leliphi iqonga olikhethayo.
Nceda ufumane ngezantsi ukukhawulezisa ngokukhawuleza kwimithombo emibini ethandwa kakhulu ehlawulelwayo yolwazi olusetyenziselwa ukuthengisa ngemini:
Izinto ezimbalwa ezinikezelwa kubarhwebi zizilumkiso zexesha lokwenyani kunye neeskwask, kunye nohlalutyo lobuchwephesha olumnandi. Kucatshangelwa ukuba kuyabiza kakhulu ukubhalisa kule.
Isicwangciso esiliqili sokurhweba ngemini iya kuba kukusebenzisa uninzi lweentsuku ezili-14 zesilingo sasimahla ukuze ukwazi ukuthatha uvavanyo. Kubaluleke kakhulu ukuba ukhumbule ukuseta isikhumbuzi sokucima umrhumo wakho ngaphambi kokuphela kwetyala lasimahla.
Iindaba zeendaba (Ngaphambili ebizwa ngokuba yiRansquawk)
Ngokusasaza iindaba ngexesha lokwenyani, ukuza kuthi ga ngoku malunga nophuhliso lwehlabathi, uqoqosho olukhulu, ukuthengisa ibhloko, kunye neendlela zangaphambili - ayimangalisi into yokuba lo ngumthombo ohloniphekileyo wolwazi kubarhwebi.
Oku kuhle kakhulu kurhwebo losuku, kuba uyakwazi ukujonga izishwankathelo zentengiso kusasa, emini nasebusuku noluhlu olupheleleyo lwentuthuko ye-dev ezayo yeseshoni yokurhweba ukuqala.
Sicinga ukuba xa ulinganisa izibonelelo kunye neendleko, kunokuba kufanelekile oko. Ngokusesikweni, olu hlobo lweendaba ezisexesheni lunokuchaphazela kakhulu ukurhweba kwakho kube ngcono.
No. 5: Ukwazi Ixesha Lokuyeka
Funda kwezona zibalaseleyo. Abo benze ubomi obuhle ngokurhweba ngemini bayazi ukuba kubaluleke kakhulu ukuba babenolwazi lokuba bayeke nini. Kananjalo, zibekele imida kwaye ulandele isicwangciso sakho sokurhweba.
Kanye nokuziqhelanisa noqeqesho, elinye iqhinga lokurhweba ngemini kukufunda indlela yokujongana nefuthe leemvakalelo zayo nayiphi na ilahleko enokwenzeka. Emva kwayo yonke loo nto, yonke le yinxalenye yenkqubo.
Iimvakalelo zinokuthi umhlaba uthengise emanzini ashushu, mhlawumbi ubakhokelele ekubeni baqhubeke ngakumbi kunokuba bebecwangcisile ukwenza. Abanye abathengisi abatsha banokuya kude kakhulu ukuzama ukwenza ilahleko enkulu, enokuthi ikhokelele kwimiba emikhulu ngakumbi yezemali ukuba awuqapheli.
Sebenzisa iTrailing Stop
Abahwebi bahlala besithi nciphisa ilahleko yakho, kwaye vumela inzuzo yakho iqhubeke. Ukumisa umkhondo kulunge kakhulu ekwenzeni ukuba abathengisi benze loo nto kwaye bakhusele naziphi na izikhundla kwisikhundla.
Enye yezona zinto zibalaseleyo malunga nokusebenzisa isitayile sokulandela njengenxalenye yesicwangciso sakho sokurhweba ngemini kukuba unokuseta ukuyeka ukuhamba ngokweentengiso. Oku, ewe, kuthetha ukuba unokulandela ezo ndlela ngaphandle kokugcina iliso elinye kwiimarike ngalo lonke ixesha.
Sebenzisa iiMiyalelo zokuMisa kunye nokuMisela
Isicwangciso esiliqili sokuthengisa esisetyenziswa phakathi kwabarhwebi kukusebenzisa ukumisa kunye nokunciphisa iiodolo.
Umyalelo wokulinganiselwa uthetha ukuba uya kubeka ubuncinci okanye ixabiso eliphezulu ofuna ukuthengisa ngayo impahla yakho. Oku kuthetha ukuba ixabiso alizukuya ngaphaya kwexabiso elikhankanywe apha ngasentla, nokuba uyathengisa okanye uyathengisa.
Umyalelo wokumisa, kwelinye icala, kuthetha ukuba useta ixabiso elithile. Kwakhona, nokuba ukuthenga okanye ukuthengisa awukwazi ukuya ngaphaya kwelo xabiso.
Umzekelo, ukuba unesikhundla eside, unokubeka ixabiso lakho ngaphezulu kwexabiso lentengiso langoku-njengoko oku kunceda ukuba wenze inzuzo. Uya kwandula ke uqhubeke kwaye usete i-odolo yokumisa phantsi kwexabiso langoku-eliza kuthi libambe ilahleko kwindawo leyo.
Xa isikhundla sakho sihlala bukhoma, yonke into iyazenzekelayo ngoko awudingi ukuba nexhala lokuvala indawo. Zombini iiodolo ziyindlela elungileyo yokuba wena njengomrhwebi uthathe inzuzo yemali, kunye nokuthintela ezo fowuni zoyikekayo zisuka kubarhwebi bakho.
No. 6: Lumkela Iindleko Zokurhweba
Uninzi lwabarhwebi bemini bahlawula iifizi ezahlukeneyo ezinje ngexabiso lomda kunye nekhomishini. Abahwebi abasebenza kakhulu mihla le bahlala benelungelo lokufumana izaphulelo ezizodwa kwimirhumo yekhomishini.
Sicinga ukuba yinxalenye ebalulekileyo yayo nayiphi na indlela yokurhweba ngosuku lokuthengisa ukuze uzifundise ngeendleko onokuthi uzenze.
Ukubeka ngokulula, umahluko phakathi kwexabiso 'lokubuza' kunye nexabiso 'lokubhida' leasethi lisasazekile. Ngexesha elifutshane, ayinamsebenzi nokuba ingakanani i-asethi eguqukayo, umrhwebi wakho uya kuhlala esenza inzuzo yezemali. Ukusasazeka kuboniswa njenge 'pip' edla ngokuba yindawo yokugqibela kwixabiso.
Nanku umzekelo wokusasazeka kwezorhwebo:
Ixabiso lokuthenga kwestokhwe yi- $ 200.00, ixabiso lokuthengisa kwestokhwe esinye yi- $ 201.00-Ukusasazeka (umahluko wepesenti) yi-0.5%
Ukuba umrhwebi ngoku ubiza isitokhwe esinye kwaye ahlawule i- $ 201, uyakwazi ukubuza i- $ 200.00.
Kule meko, kufuneka wenze inzuzo ye-0.5% ubuncinci ukuze ukwazi ukwahlula. Nantoni na engentla echazwe njengenzuzo.
Ngorhwebo losuku ngokukodwa, ukusasazeka kunokuba lutshaba lwakho olubi kakhulu-ke kuhlala ujonga amaqonga orhwebo anokubonelela ngokusasazeka okuqinileyo. Ukuba akwenzi njalo, unokufumanisa ukuba ukusasazeka kunokuginya izibonelelo zakho ezinokubakho.
Imirhumo yeKhomishini yoRhwebo
Kanye nokusasazeka, enye into ebalulekileyo kwisicwangciso sakho sokurhweba ngemini kufuneka ukuba uzenze uyazi malunga nemirhumo yekhomishini yomthengisi.
Amaqonga amaninzi orhwebo anikezela nge-0% yokuthengisa ikhomishini. Lumka nje ukuba amanye amaqonga anokuba nokusasazeka okuphezulu ukwenza ukungabikho kwekhomishini oza kuyihlawula. Kananjalo, hlala ulinganisa intlawulo yekhomishini ngokuchasene nokusasazeka.
Apho kubizwa imirhumo yekhomishini, baya kuhlawulwa xa kuthengwa kwaye kuthengiswa.
Imirhumo yokurhoxa / yedipozithi
Ungafumanisa ukuba abanye abathengisi banikezela ngokutsala simahla, ngelixa abanye benokubiza imali encinci. Ekugqibeleni, kuya kuxhomekeka ekubeni ngowuphi umrhwebi ogqiba ekubeni uthengise naye.
Kukwafanelekile ukuba uqaphele ukuba indlela yokuhlawula ogqiba ekubeni uyisebenzise xa ufaka imali ngamanye amaxesha inokuba ngumahluko phakathi kweeyure neentsuku ngaphambi kokuba imali yakho ifike kwiakhawunti yakho yorhwebo. Yiyo loo nto ucetyiswa ukuba usebenzise indlela yokubhatala kwangoko- njengekhadi ledebhithi / lekhredithi okanye i-e-wallet.
I-7: UkuGcina iiNtengiso zakho
Bathi ixesha yinto yonke. Inye kuphela into enegalelo ekungazinzini kwamaxabiso linani le-odolo eyenziweyo kwakamsinya xa kuqala usuku lokuthengisa (into yokuqala ekuseni).
Abathengisi abanamava bahlala belungile ekuboneni iipateni, kanti ukuba umtsha kurhwebo, ungafumanisa ukuba ukuthatha imizuzu engama-20 yokuqala okanye ukufunda imarike ngaphandle kokwenza nayiphi na intshukumo kuya kuba luncedo kuwe.
Kukholelwa ngokubanzi ukuba phakathi kwemini kuxa amaxabiso engazinzanga. Ukusondela esiphelweni sosuku lokurhweba kuxa intshukumo ihlala ichola.
Ukuqala, kuyacetyiswa ukuba uwaphephe la maxesha abizwa ngokuba ngamathuba eeyure, kwaye uphephe isilingo sokwenza naziphi na izigqibo ezikhawulezayo eziyingozi kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho.
I-8: Khetha i-Niche kwaye unamathele kuyo
Kukho isixa esikhulu sempahla ngaphandle kwakho njengomrhwebi wosuku. Isicwangciso sokurhweba sosuku oluhle kunokuba kuwe ukwenza uluhlu lweebhakethi lweeasethi onomdla kuzo. Njengoko besikhe sakugquma ngaphambili, oku kunokuba yi-forex, izitokhwe, i-cryptocurrensets, okanye isinyithi-ukubala nje ezimbalwa (jonga phambili kweli phepha).
Ukuba umtsha ngokurhweba ngemini, sicebisa ukuba uqale ngenani elincinci lempahla ngexesha leseshoni nganye. Oku kuya kukunceda ukuba uphephe ukungena ngaphezulu kwentloko yakho kakhulu ukugcina umkhondo. Ngokuqala ngokuncinci, unokungena kwizakhono zakho zokurhweba ngemini ngokujolisa nje kwizinto ezimbalwa kwaye uzenze kakuhle.
Emva koko ungagxila ingqalelo kwizixhobo ezithile zezezimali nakwiimarike. Ukuncamathela kwi-asethi oyichonge njenge-niche yakho kuya kukuvumela ukuba ubeke onke amandla akho okurhweba ekufundeni. Oku kusebenza ngakumbi kunokuzama ukubalasela kuyo yonke into ngaxeshanye, ukudala ukudideka.
Njengecala, kuya kusiba yinto edumileyo kubatyali zimali abatsha ukuba bathengise kwizabelo zamaqhekeza, okukuvumela ukuba ubenakho ukubalula isixa esithile semali mali yokutyala. Ngokusisiseko, umrhwebi uya kukuvumela ukuba uthenge izabelo ezincinci kakhulu, ezinje ngesinye kwisihlanu.
Hayi. 9: Musa ukoyika ukutshintsha iSicwangciso sakho
Isenokuba yimeko apho iindlela ezithile zokurhweba ngemini zisebenza okwethutyana, kwaye emva koko uqale uzive ngathi akusasebenzi kuwe.
Nokuba abathengisi bemini abanamava phaya bayathanda ukuyixuba kancinci kwaye bazame iqhinga elitsha. Kananjalo, nokuba ungumrhwebi onamava okanye i-newbie, ngamanye amaxesha ukutshintsha izinto kulungile. Emva kwayo yonke loo nto, iimarike zotyalo-mali lwehlabathi zinokutshintsha xa kushiyeka umnqwazi, ke kuya kufuneka uqiniseke ukuba uhlala uphambi kwegophe.
Njengoko besichukumisile ngaphambili, indlela entle yokugcina umkhondo kwizicwangciso zakho ezivavanyiweyo kunye nokugcina idayari yokurhweba ukujonga emva xa uyifuna.
Ingcebiso 10: Ukukhetha uMrhwebi oSuku lweNtengiso
Ngeli nqanaba, kuya kufuneka uqhelane nezona ndlela zibalulekileyo zokurhweba ngemini kwaye unoluvo lokuba ngowuphi umkhombandlela ongathanda ukuthatha ikhondo lakho lotyalo mali. Ukujonga iindleko ezinje ngekhomishini, amaxabiso omda, ukusasazeka, kunye nezinye iindleko ziya kukunceda ukuba ube nolwazi njengoko kunokwenzeka.
Ngoku uza kudinga ukuthatha isigqibo sokuba ngowuphi umhla wokurhweba ngawo olungileyo kwisitayile sakho sokurhweba. Kukho ezinye izinto ezimbalwa ekufuneka ziqwalaselwe kuqala xa ukhetha iqonga lomthengisi, esizichaze apha ngezantsi.
Njengoko besikhe sakugquma ngaphambili, akukho ntsuku zimbini zokurhweba ngabarhwebi ziyafana Ngelixa zininzi iiasethi ezikhoyo (uninzi lwazo siludwelisile), kuya kufuneka ujonge ukuba i-niche ethile onomdla kuyo ixhaswa ngumthengisi.
Ngaba kukho izixhobo ezahlukeneyo zokuthengisa eqongeni?
Sidwelise izixhobo ezahlukeneyo zokuthengisa ngemini ngaphezulu kweli phepha. Kwaye xa kufikwa kwisicwangciso sakho sokuthengisa sosuku, kuyacetyiswa ukuba ujonge ukuba zeziphi izixhobo zorhwebo ezikhoyo kweli qonga lomthengisi nokuba zilungile na kwisicwangciso sakho.
Ngaba umrhwebi unelayisensi epheleleyo kwaye ulawulwa?
Xa uthatha isigqibo sokuba ngowuphi umhla wokurhweba oza kulungela wena, kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba iqonga linelayisensi epheleleyo kwaye lilawulwa ngaphakathi e-UK nase-EU. Eyona nto iphambili koku ibambe ilayisensi yomrhwebi evela kwi-FCA, ASIC, CySEC, okanye kwelinye iqumrhu elikwinqanaba elinye.
Ukuqinisekisa ukuba umrhwebi unelayisensi ethandekayo kuthetha ukuba iimali zakho kunye neenkcukacha zakho zikhuselwe ngumthetho. Uyakuxhamla nakwahlulo lwengxowa mali yomxhasi, ebaluleke kakhulu.
Zeziphi iintlawulo oza kuhlawulwa ngazo?
Ngokuqinisekileyo iya ngaphandle kokuthetha, kodwa kuhlala kubalulekile ukuba ungene unamehlo evulekileyo ngaphambi kokuzibophelela kumrhwebi omtsha. Ukuzazisa ngayo nayiphi na intlawulo elindelwe kuwe iya kukunceda ukuba ujonge uhlahlo-lwabiwo mali lwakho ekuhambeni kwexesha. Namathela kubarhwebi bemini ababonelela ngeekhomishini eziphantsi kunye nokusasazeka okuqinileyo.
Kuya kufuneka usoloko ujonga ukuba zeziphi iindlela zedipozithi ezikhoyo xa usenza uphando ngomrhwebi, ngakumbi ukuba unendlela ethile yokuhlawula engqondweni.
Ngokubanzi, iindlela zokuhlawula oya kuthi uzibone xa ukhetha umrhwebi ziya kuba zezi zilandelayo:
Ikhadi letyala kunye nedebhithi
Izipaji ze-E (ezinjengePaypal)
Abarhwebi abaGqwesileyo ukuvavanya iiQhinga lakho lokuThengisa uSuku
Ke ngoku ukuba uneendlela ezili-10 zokurhweba ngemini ezifanelekileyo ukuba siqwalasele, ngoku siza kuxoxa nabathengisi ababalaseleyo ukuba sizisebenzise. Elinye lala maqonga alandelayo aqinisekisiweyo anikezela ngemfumba yeeasethi ezithengiswayo, kunye nemirhumo yokhuphiswano kunye nekhomishini.
I-AVATrade ibonelela ngamaqonga aliqela orhwebo- kubandakanya iMT4. Igcina amawaka ezinto ezinokurhweba- zonke zikwimo yeeCFD. Ukusasazeka kuqinile kwaye akukho khomishini zorhwebo kufuneka zithathele ingqalelo. Abathengi abatsha banikwa ibhonasi yokubhalisa.
Ukuthengisa ngemini ngekhe kuze kungabikho mngcipheko, kodwa ukuba nesicwangciso endaweni ngokuqinisekileyo kuya kukunceda ukunciphisa le mngcipheko. Sicinga ukuba isitshixo sokuba ngumrhwebi wempumelelo yemihla ngemihla kukuzixhobisa ngolwazi oluninzi ngangokunokwenzeka.
Ukubeka ngokulula, funda i-ins kunye nokuphuma kwintengiso yosuku ngaphambi kokuba ungene ngaphakathi kwaye uthathe nayiphi na ingozi enkulu. Ngethemba, ngoku unoluvo olucace ngakumbi lokuba ungaloluphi uhlobo lomrhwebi wosuku onqwenela ukuba lulo kwaye ukhethe iingcebiso ezimbalwa apha endleleni!